REYSAL WASAARE KHEYRE OO SHEEGAY IN LAGU HISHIIYEY QAABKA DOORASHADA SOOMAALIYA – Kalfadhi
October 18, 2018 October 18, 2018 Kalfadhi
Reysal Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre, ayaa isaga oo shir gudoominaya kulanka Golaha Wasiirada ee maanta, hadalkana u jeedinaya Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Farmaajo, waxa uu sheegay in lagu hishiiyey qaabka doorashada Soomaaliya, oo ay tan ugu soo horeyso ay tahay iney dhacdo 2020-ka. “Waxa meesha lagu soo bandhigay waxay tahay in lagu hishiiyey qaabka ay doorashada u dhici doonto, oo wax weyn ah” ayuu Reysal Wasaaruhu ku yiri Madaxweyne Farmaajo.
Kheyre waxa uu sheegay inuu qabyo tirka dastuurku soo dhawaaday, taas oo u baahan inuu ogolaansho ku helo afti dadweyne. Maaha dastuurka oo kaliya ee sidoo kale waxaa jira arrimo fara badan, oo sameyn ku leh in ay Soomaaliya ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah, waxaana ka mid ah in nidaamka xisbiyada sidii loogu gudbi lahaa ay ahaato mid dhameys tiran, intaan doorashada la gaarin ka hor, taas oo uu Reysal Wasaaruhu sheegay in ay shaqo ku socoto. ” Waxa meeshaan lagu soo bandhigay waxay tahay in intii ay Xukumaddu jirtay ay muuqato in dastuurkii dhameystirkiisa uu dhaw yahay, oo uu meel dhexe maraayo” ayuu yiri Kheyre.
Isagoo Madaxweynaha u sheegaya in waxa ay Xukumaddu qabatay ay tahay Siyaasaddii Qaran ee uu Baarlamaanka ka hor sheegay, ayuu Reysal Wasaare Kheyre yiri ” shuruucdii badankeed waan dhameystirnay, baarlamaanka ayaanna ku wareejinay”.
Reysal Wasaarahu wuxuu ku dheeraaday ku amaanidda Xukumaddiisa sida ay u wajahday arrimaha maaliyadda qaranka iyo ka hortaga musuqa, oo waxa uu ku dhaliilay xukumadihii ka horeeyey in ay dalka geliyeen deen gaareysa 70 milyan oo Doolarka Mareykanka ah. ” Dowlidihii naga horeeyey waxay dalka geliyeen ugu yaraan 70 milyan oo deen ah, iyadoon inagana aan waxba nalagu yeelan” ayuu u sheegay Kheye Madaxweyne Farmaajo.
Reysal Wasaaruhu wuxuu sheegay in haddii wadadii ay Xukumaddiisu ku socotay ay kusii taagnaato ay keeni doonto in Soomaaliya laga cafiyo deymaha, taas oo, sida uu sheegay, Soomaaliya kusoo celin karta ruuxda. Kheyre waxa uu sheegay in intii uusan imaan xafiiska 20 meel ka badan laga ururin jiray daqliga dowladda, hase ahaatee ay Xukumaddiisu suuragelisay in hal meel, oo ah Wasaaradda Maaliyadda, laga ururiyo, lagana bixiyo. Isagoo muujinaya sida ay taageerayaasha caalamka ee Soomaaliya ugu qanceen nidaamka maaliyadda qaranka ayuu yiri “Madaxweyne waxaa laguu sheegay in ay aduunyadu toos noo aamintay, oo ay bilawday in ay dhaqaalo nala siiyo”.